Fiatrehana ny ady amin’ny covid-19: miantso ny fanjakana hiasa am-pahamarinana ny FFKM | NewsMada
Fiatrehana ny ady amin’ny covid-19: miantso ny fanjakana hiasa am-pahamarinana ny FFKM
Namoaka hafatra ny eo anivon’ny FFKM, omaly tamin’ny fitondrana am-bavaka ny firenena sy ny vahoaka. « Miantso ny fanjakana hanao ny asany am-pahamarinana. Tsy hanararaotra ny zava-misy ho amin’ny tombontsoa manokana… Ady iombanana ity. Aoka handeha am-pahamarinana isika… Aoka hampitsahatra ny mety hiteraka fisaratsarahana… Reraka ny vahoaka noho ny fahasahiranana ka mila fitoniana sy filaminana », hoy izy ireo. Niantso ny rehetra hibebaka sy hiaiky heloka koa ny fiangonana amin’izao fiatrehana ny covid-19 izao.
Etsy andaniny, nisaotra ny filoham-pirenena ny FFKM amin’ny nanomezany anjara fotoana ny fiangonana eo anivon’ny TVM/RNM isan-kariva amin’ny 5 ora ary niangavian’izy ireo ny hampitan’ireo haino aman-jery rehetra izany ho anisan’ny « Miara-manonja » koa amin’izao herinandro Masina izao.
Fampanenoana lakolosy isaky ny mitataovovonana
Ankoatra izany, nanentana ny fiangonana rehetra ny FFKM mba hampaneno lakolosy sy anjomara isan’andro amin’ny 12 ora ka hanokana fotoam-bavaka ho an’ny firenena.
Tsiahivina fa notanterahina, omaly tetsy amin’ny FJKM Ana-la­­ke­ly ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana notarihin’ireo filoham-piangonana efatra mirahalahy. Nitarika izany ny fi-lohan’ny FJKM, ny mpitandrina Andriamahazosoa Irako Ammi. Namaky ny tenin’Andriamanitra ny arsevekan’Antananarivo, ny Mgr Razanakolona Odon.
Fiarovana ireo sahirana sy marefo…
Nitondra ny teny fampianarana kosa ny filohan’ny Angli-kanina (EEM), ny Mgr Ranarivelo Samoela Jaona. « Ahoana ny hamadihana izao tranga izao mba hitondra fihavaozana eo amintsika tsirairay ? Fiovana eo anivon’ny fiarahamonina, ny fiangonana sy ny firenena ?… Ilaina ny fibebahana sy fiaken-keloka afahana manova sy hitondra fihatsarana eo amin’ny fiainantsika… Misy ny fanantenana », hoy izy. Nitondra ny ranombavaka kosa ny filohan’ny Loteranina (FLM), ny Rev. Rakotonirina David ka niantsoany ny fiarovan’Andriamanitra ireo marefo sy sahirana, ianjadian’ny vokatry ny coronavirus. Ny kristianina mba tsy ho kivy na hiraviravy tanana fa hanana fanantenana…
Fandaharam-potoana fiaraha-mivavaka herinandro Masina
Anio, alatsinainy etsy amin’ny FJKM Isotry Fitiavana. Ny talata kosa, hotanterahina eny amin’ny FLM Ambatovinaky. Hatao eny amin’ny EEM katedraly Ambohimanoro kosa ny alarobia. Ny alakamisy horaisin’ny eny amin’ny FLM 67 ha ary hatao eny amin’ny katedraly katolika Andohalo kosa ny zoma masina. Samy handeha mivantana amin’ny TVM/RNM avokoa isaky ny amin’ny 5 ora hariva ireo fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ireo.